WARBIXIN: Muxuu Soomalida muhiim ugu yahay tirakoobka Kenya? - Jigjiga Online
HomeSomalidaWARBIXIN: Muxuu Soomalida muhiim ugu yahay tirakoobka Kenya?
WARBIXIN: Muxuu Soomalida muhiim ugu yahay tirakoobka Kenya?
Nairobi (JigjigaOnline) – Dalka Kenya, waxaa muddo toddobaad ah kadib lagu wadaa in laga billaabo tirakoobka qaran oo guud ahaan dalka laga sameyn doono, kaas oo 10-kii sanaba hal mar la qabto.
Hase yeeshe, shacabka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa walwal ka muujiyay tirakoobka sanadkan, iyagoo sheegay inaan la gaari karin meelaha ay deggan yihiin dadka qaarkood, taas oo sabab u ah abaaro baahsan oo ka jira qeyba badan oo kamid ah gobolka.
Abaarta ayaa si weyn u saameysay dadka reer guuraaga ah, taasi oo keentay in daaq iyo biyo ay xoolahooda uga raadiyaan masaafo aad u fog.
Gudoomayiha guddiga xoolo dhaqatada Kenya Dubad Cali Cameey oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in Soomaalida xoola dhaqatada ah ee Waqooyi bari ay intooda badan xilligan abaarta ka gudbeen xudduudaha Soomaaliya iyo Itoobiya, halka qaarkoodna ay gobollada kale ee Kenya ay u tallaabeen.
Wuxuu sidoo kale sheegay sida uu Tirakoobka saameyn ugu yeelanayo bulshada Soomaalida ah ee ka tirsan shacabka Kenya.
”Tirakoobka Soomaalida muhiim ayuu u yahay sabatoo ah haddii aanan la tirakoobin way adagtahay in qeybtooda ay dalka ka helaan. Waxaa adkaaneysa inay helaan adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka”.
Sidoo kale tirakoobkan ayaa saameynaya doorarka siyaasadeed ee ay qaataan bulshooyinka dalka Kenya.
Dubad Cali wuxuu ra’yi ahaan qabaa in dib loo dhigo tirakoobka deegaannada Soomaalida, maadaama aan hadda la heleynin dadkii la tirakoobi lahaa, oo ay reer guuraa yihiin.
“Dadkii oo dhan ma joogaan, cid la tirakoobo lamaba helayo. waxaa la rabay madaxda gobolkaan inay dacwodaan, oo maxkamad tagaan ayna dalbadaan in dib loo dhigo tirakoobka shacabkooda”, ayuu yiri Dubad.
Bulshooyinka Kenya ayaa la aaminsan yahay in ay wax badan ku helaan tirada, ayna aad u daneeyaan.
Qoondada dhaqaalaha ee dalka iyo kuraasta baarlamaanka ayaa ku xiran hadba tirada shacabka ah ee ku nool deegaannada kala duwan iyo qoomiyadaha uu waddanka ka kooban yahay.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Jimcadii ka codsaday shacabka Kenya inay u diyaar garoobaan howsha tirakoobka qaranka, taasoo uu ku tilmaamay mid muhiimad weyn leh.
Dowladda ayaa ka noqotay go’aan ay horay ugu shaacisay in 26-ka bishan Agoosto ay tahay maalin fasax qaran ah, taasoo hadda ku asteysan maalinta tirakoobka la sameynayo.
Sanadkii 2009-kii, oo la sameeyay tirakoobkii ugu dambeeyay ee Kenya, waxaa magacyada dadka lagu diiwaan galinayay qalin iyo warqad, hase yeeshee, 10 sano ka dib waxaa hadda shacabka lagu tirin doonaa, diiwaankana lagu galin doonaa hannaan casri ah oo Internet-ka ku xiran(Digital).
Qarax Lagu Hoobtay Oo Gilgilay Xaflad Aroos Iyo Tirada Dhimashada Illaa Hadda La Xaqiijiyey